Maitiro ekudzima ese Safari browser plugins | Ndinobva mac
Safari, senge mabhurawuza mazhinji, inogona kushandisa akasiyana plug-ins, mazhinji acho anotipa mamwe masevhisi asina kuiswa natively. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye akashatirwa ndeye Flash, plug-in iyo mabhurawuza mazhinji asisiri kutsigira natively, rutsigiro rwatinokwanisa kumisikidza kana tichida kuimisa kuti tishanyire webhusaiti yakagadzirirwa neiyi Adobe tekinoroji
Safari inotibvumidza kumisikidza yega kana kuremadza yega kana pamwe, kuitira kuti pasave ne plug-in, yakadai seJava, Flash ..., inoitwa kana tiri kubhurawuza. Kunyange zvakadaro, iyo yazvino vhezheni yeChannel, yabvisa kupinda kune plug-ins, zvekuti parizvino hatigone kuvasvitsa kuti vavashandise kana kuvamisa, poindi yakaipa kwazvo yeChannel inogona kudhura, zvirinani pakati pevashandisi vane izvi zvinodiwa.
Usati wamisa basa ma plug-ins anofanirwa kutariswa kuti haana chekuita nekuwedzera, saka kana tikadzibvisa, zvinowedzerwa zvatakaisa muSafari zvicharamba zvichishanda pasina dambudziko. Iwo ekuwedzeredza anowanzo gadzirisa mashandiro ebrowser nepo plug-ins ichinyanya kuitirwa kupa multimedia rutsigiro.
Dzima Safari plug-ins paMac
Dzima ma module ese anomhanya muSafari pamwechete maitiro akareruka zvinongotora masekonzi mashoma. Heano maitiro ekuvaremadza.
Kutanga isu tinovhura iyo Safari browser uye enda kune zvaunofarira zviri mukati meS Safari menyu.
Ipapo tinoenda kune iyo tab Chengetedzo.
Iye zvino isu tinongofanirwa kumisikidza bhokisi Internet modules, kuitira kuti ma plug-ins ese amire kushanda muSafari.
Tevere isu tinofanirwa kutangazve bhurawuza, asi kuti uwane mhedzisiro uye tione kuti ese ma plug-ins akamira kushanda, rakanakira nderekuti tangazve yedu Mac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzima ese Safari browser plugins
Zvinhu 3 zvave kuwanikwa zveMac, iOS uye Apple Watch
CarPlay seyakajairwa pane itsva Pioneer michina